ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်ကို အရသာပိုရှိအောင် လုပ်နည်း | yathar Magazine
Foodie တစ်ယောက်ရဲ့ Diary
သင်ဟာ ဟော့ပေါ့ဆိုင် တစ်ဆိုင်ကို ရောက်တာနဲ့ ကိုယ်သယ်လာတဲ့ ဗန်းအလွတ်ထဲကို စားချင်တာအကုန် ကောက်ထည့်…… ဟင်းရည်အိုးထဲကို အိုးဆန့်သလောက် အကုန်ကောက်ထည့်တတ်သူလား?
ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်က စစချင်းမှာ အရသာမရှိပဲ ကုန်ခါနီးလေ အရသာရှိလေ ဖြစ်နေတတ်သလား? အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ သင် ဟော့ပေါ့ကို အရသာရှိရှိ မစားတတ်သေးပါဘူး….။
ဒါ့ကြောင့် ဘာလာလာဝါးကနေ ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်ကို အရသာရှိစေမယ့် အချက်လေးတွေကို ပြောပြမယ်နော်…။ ခေါင်းထဲ စွဲအောင်သာ မှတ်ထားလိုက်ပေတော့။
၁။ ပထမဦးစားပေးက ဟင်းရည်ထဲထည့်မယ့်အရာတွေ ဟော့ပေါ့ဆိုင်ရောက်တာနဲ့ အရင်ဆုံး ယူရမှာက ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်ကို အရသာရှိစေမယ့်အရာတွေပါ။ သင်စားချင်တဲ့ အရာတွေက ဒုတိယဦးစားပေးပါ။
၂။ လတ်ဆတ်တဲ့ ငါးခေါင်း ဟော့ပေါ့ထဲကို ထည့်သင့်တာက ငါးခေါင်းပါ။ တစ်ချို့ငါးခေါင်းတွေက မလတ်ဆတ်ရင် ဟော့ပေါ့က ငါးညှီနံ့ကြီး ထွတ်လာတတ်တော့ သင် feelအောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ငါးခေါင်းနဲ့ ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းရည်တွေက ဟင်းရည်အရသာကို အပြတ်မိုက်သွားစေပါတယ်။
၃။ မှိုတွေ ဟော့ပေါ့ဆိုင်ထဲမှာ ရှိသမျှမှိုမျိုးစုံ အကုန်ထည့်ပါ။ မှိုတွေက ဟင်းရည်ကို ပိုချိုစေပါတယ်။ မှိုအမျိုးအစားအကုန်လုံး ထည့်လိုက်တာက ဟင်းရည်ကို အရသာပိုတိုးစေတယ်လေ။ မှိုက ဟင်းရည်ထဲ အချိန်အကြာကြီးထည့်ထားရင်တောင် အရမ်းကြီးပျော့ပြဲမသွားစေတဲ့အတွက် သူ့ကို ဟင်းရည်ထဲက မဆယ်ယူခင်အချိန်အထိ ဟင်းရည်ကို ပံ့ပိုးပေးနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အပ်မှိုကတော့ အရည်နည်းနည်းပိုစုပ်ယူတတ်တော့ ဟင်းရည်ပမာဏကို နည်းနည်းချိန်ထည့်ထားပါနော်။
၄။ ပြောင်းဖူးအကြီး ပြောင်းဖူးအကြီးကို ပိုင်းထားတာလေးတွေ ဟော့ပေါ့ဆိုင်တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ အဲ့နေရာမှာ သတိထားရမှာက ပြောင်းဖူးကို အဖျားပိုင်းထည့်တာထက် ပြောင်းဖူးအလည်ပိုင်းက ပိုချိုပါတယ်။ မဟားးတရားမထည့်ပဲနဲ့ တစ်ပိုင်း နှစ်ပိုင်းထက် ပိုပြီး မထည့်ပါနဲ့။ (ပြောင်းဖူးအသေးက ဟင်းရည်ကို အရသာ မပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက် မထည့်သင့်ပါ။)
၅။ မုန်ညှင်းတွေ ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်းနဲ့ ရိုးရိုးမုန်ညှင်းကို ထည့်ပါ။ ဒါဟာ ဟင်းရည်ကို ပိုချိုစေပါတယ်။ ကန်စွန်းရွက်ကို အရင်မထည့်ပါနဲ့။ ကန်စွန်းရွက်က ဟင်းရည်ကို ဒီလောက် မပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အပြင် အိုးထဲမှာ အချိန်ကြာကြာထားရင် အရမ်းပျော့ပြဲသွားတတ်တာက အားနည်းချက်ပါပဲ။
၆။ နောက်ဆုံးထည့်ရမယ့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ရွှေဖရုံသီး၊ မုန်လာဥနီနဲ့ ဂေါ်ဖီပန်းပွင့်နည်းနည်းပဲ ထပ်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒီလောက်ဆို ဟင်းရည်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်တာ တော်ပါပြီ။
၇။ NO EGG!!! ဟိုး….ဟင်းရည်ထဲကို ကြက်ဥမထည့်နဲ့။ ဟင်းရည်ထဲကို ကြက်ဥတစ်လုံးလောက် ဖောက်ထည့် ပစ်မှ ဟင်းရည်အရသာရှိမှာပေါ့ဆိုတဲ့ အချက်ကြီးကို သင့်ခေါင်းထဲက ဖယ်ထုတ်လိုက်စမ်းပါ။ ဟော့ပေါ့ဆိုင်က ဟင်းရည်တွေက သင့်လက်ချက်နဲ့ ကြက်ဥဟင်းရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာ ဘယ်နှစ်ခါ ရှိနေပြီလဲ? ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်ဆိုတာ အစကတည်းက အခြေခံအရသာရှိပြီးသားမို့ တခြားအရာတွေ ထည့်တာနဲ့တင် လုံလောက်ပါပြီ။ ကြက်ဥထပ်မထည့်ပါနဲ့တော့။
၈။ NO CRAB!!!! ဂဏန်းမထည့်ပါနဲ့။ ဂဏန်းက ဟင်းအိုးထဲမှာ ကို့ယို့ကားယားနေရာယူရုံကလွဲပြီး ဟင်းရည်ကို ထိထိရောက်ရောက် အရသာမရှိစေပါဘူး။ တစ်ချို့ဟော့ပေါ့ဆိုင်တွေမှာ ပေးထားတဲ့ ဂဏန်းတွေဆို မလတ်ဆတ်ပါဘူး။ မလတ်ဆတ်တဲ့ ဂဏန်းကို ဟင်းရည်ထဲထည့်ပြုတ်ပြီး ဝမ်းနှုတ်ဆေး ဟင်းရည်အဖြစ် မပြောင်းလဲပစ်ပါနဲ့။ ကြုံဖူးကြလား? ဟော့ပေါ့စားပြီးအပြန် အီးပန်းတာမျိုး…. ဗိုက်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးလေ။ သင်တို့စိတ်ထဲတော့ အချဉ်ရည်မသန့်လို့ ဆိုပြီးပဲ အလွယ်တကူတွေးမိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ်တိုင်တောင်မသိပဲ ဝမ်းနှုတ်ဆေးဟင်းရည်တွေ သောက်လာမိခဲ့တာပါ။ (ခြွင်းချက်အနေနဲ့ ဂဏန်းက အရမ်းလတ်ဆတ်နေရင်တော့ တစ်ကောင်လောက်ထည့်ပါ။ အကောင်သေးတွေ ထည့်ရင် ဂဏန်းလက်တံတွေက ဘာမှ အရသာမရှိတာမို့လို့ လက်တံကို ဂဏန်းကိုယ်ထည်ကိုပဲ ထည့်ပါနော်။)
၉။ ပုဇွန် ပုဇွန်ကို များများယူပြီး ၃မိနစ်လောက် ဟင်းရည်ထဲထည့်ပြုတ်…ပြီးရင် လက်အိတ်နဲ့ ပုဇွန်အခွံတွေနဲ့အမြှီးပိုင်းတွေကိုခွာ….ပြီးတော့မှ အခွံမရှိတော့တဲ့ ပုဇွန်တွေကို ဟင်းရည်အိုးထဲ ပြန်ထည့်ပြိုက်!!! ဒါနဲ့….စကားမစပ် ပုဇွန်က လတ်ဆတ်လားဆိုတာ သေချာကြည့်နော်။ မသိဘူး..ငါကတော့ ပုဇွန် လတ်လတ်…မလတ်လတ် ဟော့ပေါ့ဆိုင်ရောက်တုန်း စားမှာပဲဆိုရင်တော့ သင် ပန်းကမ္ဘာထဲရောက်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များနေပါပြီ။
၁၀။ ဂုံးတွေ….ကမာတွေ မချစ်စနိုးရဲ့အတွေ့အကြုံအရတော့ ဂုံးနဲ့ ကမာတွေက တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်လောက် ပြုတ်ပြီးရင် အခွံလေးတွေ ဟလာလိမ့်မယ်။ အဲ့အခါကျရင် ဆယ်ပြီး ဂုံးနဲ့ကမာတွေကို ပြန်ဆယ်… အခွံတွေဖယ်ပြီး အထဲက အသားတွေကို ထုတ်ပြီး ဟင်းရည်အိုးထဲ ပြန်ထည့်လိုက်ပါ။ မဟုတ်ရင် အဲ့အခွံတွေက ဟင်းရည်အိုးထဲမှာ တော်တော်မျက်စိနောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်!
၁၁။ ဟင်းရည်ထဲ ထည့်ရမယ့် နောက်ဆုံးအဆင့် အခုချိန်က အသားလုံး ထည့်ပြုတ်ရမယ့်အချိန် ရောက်ပါပြီ။ ဘာလို့ အသားလုံးကို နောက်ဆုံးမှ ထည့်ပြုတ်ခိုင်းလဲ သိလား? အသားလုံးတော်တော်များများက ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါ ဟင်းရည်တွေက အသားလုံးတွေထဲ စိမ့်ဝင်သွားပါတယ်။ ပြုတ်ပြီးသား အသားလုံးတွေကို ကိုက်ဝါးလိုက်တဲ့အခါ အရည်လေးတွေ ထွက်လာတာ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဟင်းရည်ကို အရင်ဆုံးအရသာရှိအောင် လုပ်ပြီးမှ အသားလုံးထည့်ပြုတ်ခိုင်းတော့ အသားလုံးက ပိုအရသာရှိသွားတာပေါ့။ ၁၀။ ဟင်းရည်ထဲမှာ အရင်ဆုံး ထည့်မပြုတ်သင့်တဲ့အရာတွေ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အူတွင်းကလီစာတွေ (ဝက်အသည်း၊ ဝက်အူ၊ ကြက်အသည်းအမြစ်လိုအရာတွေ) ၊ ပြည်ကြီးငါး၊ ကင်းမွန်လို အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ စားရတာ မာတာတာကြီး ဖြစ်လာပြီး ဟင်းရည်ကို ပျက်စီးစေပြီး ညှီနံ့ဖုံးလွှမ်းစေတဲ့အရာတွေနဲ့ အမဲသား၊ ဆိတ်သားလိုမျိုး ပင်ကိုယ်ညှီနံ့များတဲ့ အသားတွေကို အရင်ဆုံး မထည့်ပါနဲ့။
အခုပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးက ဟင်းရည်ကို အရသာရှိအောင် လုပ်နည်းတွေနော်။ အရင်ဆုံး အရသာရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှ ကိုယ်ကြိုက်တာတွေ ထည့်စားကြပါဗျို့။
ကဲ…ဒီစာကို ဖတ်ရင်း ဟော့ပေါ့စားချင်သွားပြီ ဟုတ်! ဒီတစ်ခါ ဟော့ပေါ့သွားစားရင် မချစ်စနိုးပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ ဟော့ပေါ့ဟင်းရည်ကို အရသာရှိအောင် လုပ်ပြီး စားခဲ့နော်။ ပြီးရင် မချစ်စနိုး သွားရည်ယိုရအောင် ကိုယ်စားခဲ့တဲ့ ဟော့ပေါ့ပုံလေးတွေလည်း လာပြကြပါဦး..။
Original Uploader Ma Chit Snow
ဘယ်လောက်စားစား ဝိတ်မတက်တဲ့ အစားအသောက် ၅ မျိုး